China Carbon fiber license plate ekike rụpụta na ụlọ ọrụ | Yan Tuo
Nkọwapụta ngwaahịa: Emebere nke ọma dịka eserese ahụ, enwere ike ịhazi ya maka okpokoro ikike ikike nke mba ndị ọzọ na ụdị ngwaahịa dị iche iche. Biko gakwuru ndị ahịa iji chọpụta ụdị na ọnụahịa mgbe ị na-etinye iwu.
Nkọwapụta 140mm * 450mm * 2mm Ihe ngwugwu Akwụkwọ Box, ụfụfụ, High Pressure Bag
Mentkwụ Tergwọ Okwu T / T, D / P, Western Union, Paypal Production ikike: Iberibe 50, 000 Kwa ọnwa
Ngwaọrụ Polyacrylonitrile-Dabere Carbon Fiber Ọrụ -Dị Ike Dị Ike
Okpokoro ikike ikuku carbon dị ọcha dị iche na etiti akwụkwọ ikike ikuku carbon carbon na-adabere na ABS ma ọ bụ alloy alloy. Ọ na-emi esịnede elu-edu carbon eriri akwa na resin. Ọ bụ ìhè dị arọ, dị mma na ike, dị mma n'ọdịdị, njedebe dị elu ma na-emesapụ aka, na-adịgide adịgide ma na-adịgide adịgide. Ọ na-eme nchara nchara, a kwadebere ya akụkụ maka ọdịdị ndị kachasị ewu ewu nke ụgbọala taa. Ọ dị iche na ihe igwe nkịtị. Ngwongwo ọla na-adị mfe nchara site na electroplating. Igwe anaghị agba nchara na-adị mfe gwụ mgbe ejiri ya maka oge ụfọdụ, na-acha odo odo ma na-achagharị, ebe akara akwụkwọ ikike carbon fiber agaghị apụta ọnọdụ a.
1. Product nkọwa: Ofụri Esịt ahaziri dị ka drawings, na ike ga-ahaziri maka mba ndị ọzọ 'ikike efere okpokolo agba na iche iche nke na-akpụzi ngwaahịa. Biko gakwuru ndị ahịa iji chọpụta ụdị na ọnụahịa mgbe ị na-etinye iwu.
2. Ihe: ihe nkpuchi carbon dị ọcha, ike dị elu na ịdị arọ;
3. Production usoro: elu-ọkọlọtọ metal ebu, na-ekpo ọkụ na ịpị usoro ịkpụzi;
4. LOGO nwere ike ahaziri
Companylọ ọrụ anyị bụ R & D na ngwaahịa na emeputa ihe na-eji eriri carbon dị ka akụrụngwa. Ọ nwere ọgaranya mmepụta ahụmahụ na tozuru okè management mode, ebu mmepe na ngwaahịa ịkpụzi, post-nhazi na nkwakọ mmepụta, na nwere ya QC ngalaba na-nditịm ịchịkwa àgwà nke ọ bụla ngwaahịa. Usoro ọ bụla nke usoro. Anyị na-agbasi mbọ ike inye gị ngwaahịa carbon fiber. Ndị ahịa nwere ike ịnye ihe nlele maka mmepe, ma ọ bụ mepee na rụpụta dabere na eserese na echiche. Carbon fiber nwere mmetụta iyi pụrụ iche, ọ dịkwuo arọ, na-eguzogide oke okpomọkụ na nrụgide, na-eguzogide ekwe ekwe. Enwere ike iji ya na ụdị ndụ niile.
Nke gara aga: Carbon eriri ikuku aro
Osote: 3K PlainTwill kpaa Carbon Fiber mpempe akwụkwọ